Akuyona imfihlo ukuthi ubulili yingxenye ebalulekile yokuphila kwethu kwansuku zonke - kuyinani elikhulu lokuhlangenwe nakho okusha okungazilibaleki. Kodwa-ke, luhlobo luni lobulili kanye nenjabulo ongayikhuluma ngayo, uma kaningi kunamagama amaningi: "Inhloko, ukucasuka, ukhathele, i-perenervnichala, njll". Futhi ngemva kweminyaka embalwa nje, isimiso socansi lwe-conjugal siyaqagela kakhulu (satsha futhi senza uthando), okuvele kuso akukho ndawo ongayithola. Ngaphandle kwamanje okwejwayelekile, ukuphuma empilweni yansuku zonke futhi ungakuvumeli ukugwinya lo mzwelo omuhle kunomsebenzi ophelele.
"Ukusakaza okusha" kobudlelwane bakho bocansi - ukuthi ungayenza kanjani
Ukuze uqiniseke ukuthi umbhede wakho womshado awuhlali unesithukuthezi ongenalutho, kuzodingeka uxhumane nefantasy yakho yesifazane, ume umkhawulo wokuhlonipha, uqale ngesibindi ngenkathi yokuhlolwa. Yiqiniso, "umoya omusha" ebuhlotsheni bobulili ngokuqinisekile uzodinga ukubekezela, ukubekezela, noma ngabe kuwufanele.
Qala ngokuveza ngokucacile izifiso zakho komunye nomunye. Ngemuva kwalokho, ukuveza nge-shirt engekho noma ngama-cutlets angenakusihlwa njalo aqinile, futhi uhlale phansi ukuxoxa ngo-sex otnoshniya, njenge-nistranno, ngesizathu esithile asinakho isibindi nesikhathi. Amazwi nje awahlobene nomusho osikisela, omile emlonyeni, futhi amagama ahambisanayo "aphume" ekhanda. Kulezi zindaba, udinga ukuba nesineke futhi uqaphele, ngoba imibuzo yilezi: "Kungani uphendulela emuva odongeni ngaphambi kokuba uyiqede?" Noma "Kungani kufanele sihambe ngokushesha kakhulu usuku lonke, kodwa singabe sikhathalela?" Akukho lutho ngaphezu kokucasula, kanye nokucasuka. Futhi njengoba le nkinga idonsa kakhulu, ilapha ngokuyinhloko "ukuphula izinkuni", hhayi ukucasula umlingani. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi inkulumo "mayelana nobulili" ngokujwayelekile akufanele iqale.
Ubulili, njengokuhlambalaza okufanayo, ukufutheka, kukhuthaza ukuhlangana, kanye nokubuyisana kwabashadile. Ngosizo lomndeni, izinkinga eziningi zomndeni zixazululwa. Akusilo lutho ukuthi ukuhlakanipha kwasekudala kusho ukuthi "abathandekayo bahlanjalazwa - basuke bekhokha nje kuphela", ngoba emva kokuxabana, njengokubusa, "isenzo sokubuyisana" siza. Ngesikhathi esidlule kuphela, ukuthola injabulo engenakulindelwe kusuka ebuhlotsheni obuseduze, uqala ukuqonda ukungafani kwenkinga ephikisana nawe.
Ngokuvamile bayakhononda ngocansi, okuyinto ngaphambi kokubikezela kwabikezelwa, uma wazi kahle konke kusengaphambili - amazwi, ukunyakaza, futhi lokhu impilo yakho yobulili iholela ekukhunjweni. Kodwa zama ukwethula ukuphila okusha embusweni obuseduze, ngaphandle kokulinda indawo kanye nehora.
Isibonelo, uma umyeni, emva kokubuya emsebenzini, eqala izigqoko zakhe zobulili ngaphandle komnyango, ungamcabangi ngamagama ukulinda kusihlwa, amabhati, njll. Ngempela, ubulili obungavamile buhlinzeka kakhulu, ukufutheka, ukufudumala, ukubonakala okungenakulibaleka.
Kuyafaneleka futhi amagama ambalwa ukunikeza ukubonakala. Isibonelo, imaski ebusweni obunomsoco noma ukushisa ukushisa ekhanda akungabambi iqhaza emicabangweni yezocansi. Ngokuphambene nalokho, izigqoko zangaphansi ezintsha, ama-stockings ama-sexy kanye nezicathulo eziphezulu zizokwenza njalo into yakho nendoda. Kodwa-ke, lapha kuyadingeka ukuba uhambisane nomqondo wokulinganisa, ukuze ungesabi umlingani wakho, uhlangane nombundu embala ongabonakali, ubuso obuncane, amabhuzu, amabhuzu.
Kodwa-ke, ukulala embhedeni esikhundleni senceku ethembekileyo, kuyindlela ethakazelisayo. Abanye bamandla abo bonke bayajabula kakhulu. Sebenzisa esitokisini sakho sokungabi nasizo nokulalela, futhi indoda yakho ngeke ishiywe lutho, ngokushesha nje lapho ethatha isinyathelo ezandleni zakhe. Yini efunwa futhi efunwa.
Futhi ungahamba endleleni enamandla kakhulu. Khetha izingubo zangaphansi ezinemibala enhle, lungiselela umculo omnandi wokusakaza, hlela i-muzhustrichtiz yakho. Zama ukuvumelana ngaphambi kwalokho, ungabuka kuphela futhi ungathinti, futhi lo muntu uyakhuthaza kakhulu.
Ngempela, labo abashadile asebevele bejabule iminyaka eminingi yokuphila emshadweni nje abazi ukuthi kusho ukuthini ubuhlobo bobulili. Futhi, nawe, uzothola lokhu, uma ungaqala ukwesaba ukuzama futhi uthathe isinyathelo kuqala, ukufaka amaphupho akho ayithandayo kakhulu ekuphileni kocansi. Kuphela-ke uzongena yini kulowo moya ovuthayo, lapho uqhube khona lapho uqala khona ubuhlobo bakho.
Uhlu lwama-movie angcolile we-porn
Ukuzalwa kwamakati: St. Petersburg masquerade
Isicelo ekuthuthukiseni amakhono emihle emoto
Isimo sengqondo sezingane ngemuva kokuhlukaniswa kwabazali
Kunokuphatha umkhuhlane ngesikhathi sokukhulelwa
Izinkinga zengqondo zentsha nezindlela zokuzixazulula